ukutya nokupheka | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: ukutya nokupheka
Ukupheka isobho samakhowa ngenkukhu kunye neeNoodle zerayisi- iresiphi
Inkukhu, amakhowa, irayisi noodles - Yummy! Kwaye iluncedo! Isuphu ye-noodle yerayisi ayiyi kuba kukutya okumnandi kuphela, kodwa iya kuba luncedo emzimbeni!
Isobho senkukhu - iresiphi emnandi, elula, esempilweni
Isuphu emnandi kwaye ilula, wonke umfazi wasekhaya kufuneka abe neresiphi yoku. Emva koko, iikhosi zokuqala azikho nje kuphela, kodwa ziluncedo kakhulu kumzimba!
ezaposwa ngomhla 14.09.2021 14.09.2021
Imnandi kakhulu kwaye ibonakala ngathi iqhelekile - ipayi ngeengqimba okanye iStrudel, yeza kuthi isuka eGrisi kwaye "yalungiswa" eJamani.
Kule mihla, kukho inani elikhulu leendlela zokupheka zepie yaseStrudel, ungongeza ukogcwaliswa okuninzi, itshizi yecottage, iidiliya, iiapile kunye nabanye kuyo. Uninzi lwabantu lubhaka iStrudel ngeentlanzi ezibomvu kunye neherring enetyiwa!
Isaladi kunye caviar kunye nesalmon - iiresiphi ezininzi
Sonke siyayithanda icaviar ebomvu, ihlala ibonwa kwitafile yeholide. Kodwa yeyiphi isaladi yoqobo yokupheka nge-caviar ebomvu kunye nentlanzi? Silungiselele ukhetho lweendlela zokupheka zokutya okumnandi!
Olivier - iresiphi engaqhelekanga
ezaposwa ngomhla 13.09.2021 13.09.2021
Uninzi lwabantu bakuthi, ngokwesiko, phakathi kwezinye izinto, baya kulungisa isaladi "uOlivier" kunye no "Hering phantsi kwengubo yoboya." Ezi saladi zimnandi kudala zithandwa kungekuphela nje kwilizwe lethu, kodwa nakwamanye amazwe, kwaye ...
Ithanga eliphekiweyo isitovu - iresiphi
Ekwindla, abantu abaninzi bayalikhumbula ithanga, kungekuphela ngenxa yeHalloween, kodwa nangenxa yesityalo esitsha esivelileyo. Kodwa upheka njani ithanga ngendlela yoqobo kunye nencasa? Ungayibhaka ngantoni?
Ungakugcina njani ukutya? - iiresiphi eziluncedo kunye neengcebiso
ezaposwa ngomhla 12.09.2021 12.09.2021
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba kungcono ukugcina ukutya, wenze ntoni kwisonka esomisiweyo? Siza kukuxelela iingcebiso ezimbalwa eziluncedo kunye neeresiphi.
Indlela yokupheka i-kefir pancakes emnandi
ezaposwa ngomhla 09.09.2021 09.09.2021
Ukuzinikezela kubo bonke abathandi bamaqebengwana, okumnandi, ukubhitya, kufakwe amakhowa! Bamba iresiphi yenyathelo ngenyathelo kwaye wonwabe yummy!
Iresiphi yesoseji eshushu kunye nesonka samasi epanini
Ilula kakhulu kodwa zimnandi iisandwich. Iresiphi iya kukuvuyela ukuthanda ukutya okulula.
Iisuphu zokupheka ezivela kwihlabathi liphela
ezaposwa ngomhla 27.08.2021 27.08.2021
Kulabo bathanda into engaqhelekanga, kwabo bangatyiyo nje iborscht yesiqhelo. Silungiselele iiresiphi ezi-4 zesuphu ezivela kumazwe ahlukeneyo.
Isobho seMatball - Iiresiphi ezininzi
ezaposwa ngomhla 13.08.2021 13.08.2021
Sikukhethele iindlela zokupheka ezininzi, iisuphu ezimnandi kunye neebhola zenyama! Kukho iindlela zokupheka zabantwana kunye nabantu abadala abathanda ukutya okune-spices!
Page 1 Page 2 ... Page 645 Okulandelayo Page
Imibuzo ye-55 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-1,481.